Ayutthaya का अद्भुत मन्दिरहरू यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | के हेर्ने, थाईल्याण्ड
थाईल्याण्ड यो अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन को लागी एक लोकप्रिय गन्तव्य हो र गोप्य दुवै यसको परिदृश्य हो र यूरु वा डलर संग यात्रीहरु को लागी सस्तो छ। प्लेन सस्तो नहुन सक्छ तर त्यहाँ बस्ने खर्चले सबै चीज बनाउँछ। के नाम अयुताहया तपाईंलाई परिचित लाग्छ?
यो थाइल्याण्डको लोकप्रिय आकर्षण मध्ये एक हो: अचम्मको मन्दिर खण्डहरूको असंख्य समूह जुन युनेस्कोले पहिले नै विश्व सम्पदा साइटको नाम दिएर सुरक्षित गरिसकेको छ। तिनीहरू कहाँ छन् र कसरी भेट्टाउन सकिन्छ हेरौं।
1 आयुत्तय ऐतिहासिक पार्क
2 Attuhaya को खंडहर मा हेर्नुहोस्
3 Attuhaya पुरातात्विक पार्क हेर्नुहोस्
आयुत्तय ऐतिहासिक पार्क
यो स्थान Nra Phu Nakhon Si Ayutthaya प्रान्त मा आधिकारिक नाम हो। छन् १ city1351१ मा एक राजा द्वारा स्थापित प्राचीन शहरको भग्नावशेष र यसले १ capital औं शताब्दीको अन्त्यसम्म राजधानीको रूपमा सेवा गर्‍यो।
ऐतिहासिक पार्क सन् १ 1976 1991 मा मूल्यवान भग्नावशेषलाई जोगाउन एउटा तरिकाको रूपमा जन्म भएको थियो, तर युनेस्कोले १ XNUMX XNUMX १ मा हेरचाह र संरक्षणको अवधारणालाई थप बल दियो। शहरको महत्त्व यस्तो थियो कि यो एक विशाल शहर बनेको छ जुन दस लाख बासिन्दाहरू र एक क्रसरोड शॉपिंगको साथ थियो। सम्पूर्ण एशिया मा। जब युरोपियनहरू यसको सम्पर्कमा आए, तिनीहरूले सहयोग गर्न सकेनन् तर यसको मन्दिर र दरबारहरूको सौन्दर्य र विलासीमा अचम्मित भए।
दुर्भाग्यवस, १ XNUMX औं शताब्दीको अन्तमा, बर्मीहरूले शहरमा आक्रमण गरे र त्यसलाई जलाइदिए, र यो भग्नावशेषले आज हामीलाई ढु in्गामा बनेको विगतको महिमाको बारेमा बताउँछ।
Attuhaya को खंडहर मा हेर्नुहोस्
अयुताहया एक टापु हो जुन पा साक, लोपबरी र चाओ फ्राया नदीको संगममा अवस्थित छ। तपाईं थाइल्यान्डको अन्य कुनाबाट रेलबाट आइपुग्नुहुन्छ र स्टेशन पूर्वपट्टि छ त्यसैले तपाईंले कम्तिमा यी नदीहरू मध्ये कुनै एउटा डुry्गामा डु .्गामा पार गर्नुपर्नेछ। सत्य यो हो रेल द्वारा आइपुग्नु यातायातको सस्तो रूप हो तर एउटाले तपाईंलाई थाई परिदृश्यको सबैभन्दा सुन्दर छविहरू दिन्छ।
बैंककबाट, हुआलाम्फong्ग स्टेशनबाट, यात्रा एक घण्टा र आधा र दुई र आधा घण्टा बीच छ कुन सेवा लिनुहुन्छ त्यसको आधारमा। त्यहाँ धेरै सस्तो दोस्रो र तेस्रो श्रेणीको सीटहरू छन्। यदि तपाइँ थाई ट्रेन वेबसाइट हेर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, केहि श doubts्का राख्नुहोस् र विज्ञापन समय अघि आइपुग्नुहोस् किनभने त्यहाँ त्रुटिहरू हुनसक्दछन्। पछि, फेरी डु boat्गामा क्रसिंग पनि सजिलो छ किनकि यो सामान्य पर्यटन मार्ग हो र तिनीहरू प्रत्येक १ 15 मिनेटमा छुट्छन्। या त तपाईं तिनीहरू मा हिंड्न वा मा tuktuk.
यदि तपाईं ट्रेन चाहनुहुन्न भने तपाईं यो प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ बस। Attuyhaya को सेवाहरु बैंककबाट उत्तर टर्मिनलबाट हरेक २० मिनेटमा र अन्तिम भाग 20 मा छुट्टिन्छ। त्यहाँ प्रथम श्रेणी वातानुकूलित बसहरू छन् र सम्पूर्ण यात्रा दुई घण्टा लाग्ने अनुमान गरिएको छ किनकि मार्गहरूको अवस्था वा अनौठो स्टपको कारणले, यसले प्रत्यक्ष सेवा पनि भन्छ भने। यदि तपाईं त्यसपछि बस द्वारा आउनुभयो भने, Ayutthaya मा स्टेशन चाओ फ्रोम बजारको नजिकै Naresuan स्ट्रीट मा अवस्थित छ।
र हो, तपाईं बस बाट बच्न सक्नुहुन्छ र एउटा भाडामा लिन सक्नुहुन्छ मिनीभन वा मिनीबस त्यो MoChit स्टेशन वा Rangsit बाट प्रस्थान गर्दछ। अन्तिम खराब विकल्प वैकल्पिक कुनै कम रोचक छैन बैंककबाट डु by्गामा आइपुग्नुहोस् को Kret र Bang Pa-In मा रोकिदै। यो लामो यात्रा हो, जुन तपाइँलाई दिनको अधिकांश लिन्छ, तर यो सुरम्य छ।
यस टापुको वरिपरि सजीलो सजिलो छ किनकि त्यहाँ यू थाong्ग सडक छ जुन यसलाई बाइपास गर्छ र जहाँ तपाईं हेर्न चाहानुहुन्छ को राम्रो नक्साको साथ, यहाँबाट जान सजिलो र सरल छ। तपाईं सक्नुहुन्छ एउटा बाइक भाँडामा लिनुहोस् र यो पुरातात्विक पार्क भ्रमण गर्न राम्रो छ। ट्रेलहरू प्रशस्त छन् र मन्दिरहरू बीचको दूरी सानो छ। तपाईले टापु बाइकबाट पनि छोड्न सक्नुहुन्छ किनकि सबै नजिक छ। त्यहाँ धेरै बाइक भाडा पसलहरू छन् र तपाईं नक्शा आफ्नो स्थानीय पर्यटक कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
र यदि तपाइँ टुकटुक मनपराउनुहुन्छ भने तपाईले यहाँको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ, जुन बैंककमा भन्दा थोरै ठुलो छ। वा मोटरसाइकल भाडामा लिनु अर्को विकल्प हो।
Attuhaya पुरातात्विक पार्क हेर्नुहोस्
सामान्यतया यो तीन दरबारहरु को बारे मा छ: भव्य प्यालेस, Chantharakasem पैलेस र Wang लांग प्यालेस र एक मुट्ठीभर भग्नावशेष मन्दिरहरू र सम्पूर्ण अन्यहरू जुन अहिले सम्म सञ्चालनमा छन्। केहीको लागि तपाइँ प्रविष्टि भुक्तान गर्नुहुन्छ र अरूहरूको लागि तपाइँ गर्नुहुन्न। सत्य यो हो तपाईलाई दुई दिन दिन चाहिन्छ सम्पूर्ण क्षेत्र राम्ररी पत्ता लगाउनका लागि त्यसैले यदि तपाईंसँग दुई दिन छैन भने तपाईंले संक्षेप गर्नुपर्नेछ।
शहरको इतिहास तीन अवधिमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ, तपाईं ती तीन ऐतिहासिक अवधिको भवनहरूलाई भवनहरूमा विभाजन गर्न सक्नुहुनेछ र चीजहरू सरलीकृत गर्नुहोस्। जसलाई तपाईं छोड्न सक्नुहुन्न:
वाट माथ्याट: यो त्यहि हो जहाँ बुद्धको टाउको छ र यो एकदम भग्नावशेष छ। यो सहरको बीचमा छ र सर्वोच्च पिताको निवास थियो। यो १ XNUMX औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको हो भन्ने विश्वास छ र यद्यपि प्रांग यो अन्तिम १ 1911 ११ मा पतन भयो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि यो विशाल र धेरै अग्लो थियो।
वाट रत्चुबराना: यो सिंहासनको लागि लडिरहेको उनका दुई भाइहरूको हत्या भएको ठाउँमा राजा बोरम रच्चीरात दोस्रोले निर्माण गरे। यहाँ देवताहरूको मूर्तिहरू चोरी भए र थोरै पुन: प्राप्ति भए। भित्र बुद्धको जीवन संग भित्ति चित्रहरु छन् तर सबै बिग्रेको छ।
वाट Phra सी Sanphet: यसको तीन टावर वा चेडिस आज पुरातात्विक पार्कको प्रतीक हो। तपाईंले यी मन्दिरहरू दरबार बगैंचामा फेला पार्नुभयो र ती केवल शाही समारोहहरूमा वा अवशेष राख्नका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो। यी तीन चेदीहरूलाई तीन राजाको खरानी राखिएको छ भन्ने विश्वास गरिन्छ।
वाट चाई वट्टनाराम: यो १ Pras1630० मा राजा प्रसाद थong्गको राज्याभिषेक मनाउन निर्माण गरिएको हो र यसका वरिपरिका अरु धेरै मानिसहरू र टावरहरूको बीचमा केन्द्रीय चित्र रहेको छ। केन्द्रीय दृश्यले मेरु पर्वतलाई प्रतीक बनाएको छ र चार पार्श्व चारवटा महादेशको प्रतीक हो जुन बौद्ध विश्वकोषमा मानव जातिले बसिरहेको छ। सुरुमा यसमा १२० लाक्षणिक बुद्ध र धेरै भित्ते चित्रहरू थिए तर १ 120 औं शताब्दीमा यसलाई शूटिंग दायराका रूपमा प्रयोग गरियो र पछि ढु stones्गा र इट्टाको बिक्री सामान्य भयो।
अन्तमा, त्यहाँ छन् वाट फानन चोइg्ग, बुद्ध को एक विशाल छवि संग, वाट फुटाई सावन, the वाट Phra राम, the वाट ना फ्रेमेन, the वाट Choeng था र वाट सुवान दराराम र वाट मो Mongखोन बोफिट। अवश्य पनि त्यहाँ धेरै छन्, प्रत्येक आफ्नै आर्कषणको साथ, र यो हो किन दुई दिन एक भन्दा राम्रो छ।
साथै त्यहाँ संग्रहालयहरु छन् भेट्न यदि तपाइँ लामो समय बस्नुभयो भने तपाइँ उनीहरूलाई भेट्न सक्नुहुन्छ: Ayutthaya ऐतिहासिक अध्ययन केन्द्र पुरातात्विक पार्क, जानु भन्दा पहिले यसको भ्रमण गर्न सिफारिस गरिएको छ Chantharakasem राष्ट्रीय संग्रहालय र चाओ साम Phraya राष्ट्रीय संग्रहालय। र शहर धेरै विदेशी संस्कृतिहरूको साथ सम्पर्क भएको हुनाले, तपाईं भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ यी विदेशीहरूलाई कसरी बसोबास गर्ने भनेर जान्दछन्।
यसैले, तपाईं जान्नको लागि नजिक जान सक्नुहुन्छ डच बस्ती सत्रौं शताब्दी देखि डेटि,, जापानी जसको केही मूल छैन तर जापानी सरकारले एक पुनर्निर्माण गरेको छ जापानी पार्क समानता र पोर्चुगिज एक डोमिनिकन चर्चको भग्नावशेष संग। अन्त्यमा, तपाई यस मार्फत हिड्न रोक्न सक्नुहुन्न अयोथाया फ्लोटिंग मार्केट.
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » के हेर्ने » Ayutthaya को अद्भुत मन्दिरहरू